Fampidinana: 7,072 alaina 966,883 fotoana.
Ny Tetikasa VSKYLABS Aeroprakt A22-LS ho an'ny X-Plane by fikarohana laminera (ho avy tsy ho ela!) Vaovao Flash!
Ny Parachute Recovery System dia napetraka tamin'ny herinandro lasa ary miasa araka ny nandrasana. Nanomboka ny fitsapana sidina VR voalohany. Ny VSKYLABS Aeroprakt A22 dia novolavolaina sy namboarina mba hanehoana fanaingoana sidina Aeroprakt A22 tena marina amin'ny lafiny rafitra, fiasa, fahombiazan'ny fiaramanidina ary ny toetrany fitantanana.
Tahaka ny zokiny lahy eran'izao tontolo izao, ny fiaramanidina dia manana kalitao fitantanana tsara, fahitana ambony ary azo vinavinaina sy mamaly tokoa. Izy io dia fiaramanidina tena mahay.
Ny daty famoahana dia tsy mbola voafaritra, na izany aza, ny Tetikasa VSKYLABS Aeroprakt A22 no tetik'asa voalohany eo an-dalam-pandrosoana * ao amin'ny 'laboratoara.
Ao amin'ny sary voasarika azo zahana - santionany haingana amin'ny tontolo iainana eo am-piandrasana.